Iyo nyowani vhezheni yeLsFusion 4.0, chikuva chekuvandudza masisitimu eruzivo, yakatoburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Kuburitswa kweshanduro nyowani ye iyo ruzivo masisitimu ekuvandudza chikuva LsFusion 4.0. Chikuva yakavakirwa pane imwe yeasingawanzo kurongwa mapadadigms: basa-chikamu chirongwa (kwete kuvhiringidzwa nekushanda) uye kunyanya, saka, inosiyana zvakanyanya kubva kune ese aripo mapuratifomu pamusika (semuenzaniso SAP, Dynamics AX, 1C, .Net).
Uyewo mukati, inoshanda uye yakarongedzwa-chiitiko chiitiko kuronga kunoshandiswa zvakanyanya kushingairira Uye izvi zvese, sekureva kwevagadziri, zvinotendera kurongeka kwehukuru kuti kuwedzere kumhanya uye mhando yekusimudzira, pamwe nekumhanyisa kwemaitiro ari kugadzirwa.
Shanduko huru mu lsFusion 4.0
Ye shanduko dzinonyanya kuzivikanwa mushanduro nyowani ye lsFusion 4.0, tinogona kuzviwana nyowani runyorwa maonero akawedzerwa, chii inobvumira mushandisi kuratidza data kwete chete muchimiro chematafura akajairwa, asi zvakare mune chero imwe fomu. Iyo yekuvandudza (pamwe nemushandisi) inogona kusarudza maonero kubva paseti yezvakafanotaurwa maonero uye kuwedzera avo vega.
Yakawedzerwa kutsigira kwemaonero emapoka (imwe yesarudzo dzeakafanotaurwa rondedzero maonero). Mune maonero aya, mushandisi anogona kuronga dhata akazvimiririra mune chero chinhu uye nekudaro ita ongororo yekutanga. Muchiitiko ichi, iyo data inogona kuratidzwa muchimiro chematafura ane simba (pamwe nemukana wekuhodha, kusefa kwevatengi, kutumira kune Excel, nezvimwewo), uye nenzira yematafura akasiyana siyana uye magirafu.
Tsigiro yemamwe akati wandei emhando dzechokwadi yakaitwa kunze kwebhokisi: OAuth kusimbiswa (Yandex, Facebook, Google), kusimbiswa zvakananga pa URL uye / kana kukumbira misoro, kuzvinyoresa (kuburikidza newebhu interface).
Yakawedzerwa tsigiro yekudzosera nyika dzese, kana tambo zvinyorwa zvataurwa mune yakasarudzika mutauro uye zvinobva zvadzokororwa panotangira kune akakodzera zvitupa (izvo zvinobva zvapihwa nzvimbo zvichienderana nenzvimbo yemushandisi).
Uye zvakare iko kwekutanga mashandiro emushandisi interface akawedzerwa- Mamwe akawanda 'tevera chinongedzo' sarudzo dzave kuwedzerwa, uye kugona kuchinjira kune yakazara screen mode kwaonekwa.
Akawanda ekugadzirisa akaitwa ayo anonyanya kugadzirisa mashandiro kubva kuhurongwa mune zvimwe zviitiko: semuenzaniso, shanduko dzeboka dzaitwa zvino "pachikumbiro", kushanda neDOM kwakagadziriswa zvakanyanya, uye izvozvi zvave kugona kudzora otomatiki kugadzirisa ezvinyorwa.
Mitauro yemitauro yakawedzera zvakanyanya, semuenzaniso, ikozvino zvinotenderwa kushandisa zvirevo mumisoro yemidziyo nemafomu, kuwedzera fomu chaipo munzvimbo yekufona (nekwaniso yekuvhara, kutaura nezve paramende mune mamiriro ekufona), zvichingodaro .
Dhizaini yeUI yanga yoda kugadziriswazve uye rutsigiro rwemusoro rwakawedzerwa.
Uyewo chirongwa chakaziviswa kune anotevera mavhezheni (wechina uye wechishanu):
Yakawedzera mushandisi interface asynchrony: asynchronous kuisa kwedata rechinhu muchimiro, asynchronous kuvhura nekuvhara mafomu, asynchronous adaptive kugadzirisa zvinhu uye zvivakwa.
Tsigiro yekubatanidza uye nhaka yemafomu.
Kunatsiridza kweiyo yekuwedzera mashini, kunyanya, kuwedzerwa kwesimba rekuchinja hunhu hwezvinhu zvemafomu.
Kunyanya kuwedzera mikana yekugadzirisa mafomu: semuenzaniso, kugona kuwedzera zvivakwa zvitsva kune fomu, kugadzira zvakasarudzika tsika mafirita, chengetedza sarudzo dzakasiyana siyana kuti ushandise fomu, nezvimwe.
Tsigiro yezvimwe zvinomiririra zvivakwa.
Chinja kurongeka kwemidziyo
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo kubva papuratifomu, unogona tarisa chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyo nyowani vhezheni yeLsFusion 4.0, chikuva chekuvandudza masisitimu eruzivo, yakatoburitswa